Anisan’izany ny fihaonana tamin’i Akinwu Adesina, Filohan'ny Banky Afrikana momban'ny Fampandrosoana (BAD).
Nitaky ny filoha Andry Rajoelina ny mba hamoahana haingana ny fanampiana ara-bola hanamafisana ny fampiharana ny tetik'asa sy vina fampandrosoana izay tafiditra ao anatin'ny politika vaovao ny Fanjakana. Ny fanjariana ara-tsakafo, ny fampiasana ny angovo azo havaozina sehatra laharam-pahamehana amin’izany.
Ny tanjona hoy ny filoha Andry Rajoelina dia ny hahatonga an’i Madagasikara ho lasa sompitrin’ny famokarana vary eto amin’ny faritra oseana indiana ary hampitombo avo roa heny ny famokarana herinaratra ao anatin’ny 5 taona. Naneho ny fahavononany hiara hiasa hatrany amin’i Madagasikara moa i Akinwu Adesina filohan’ny BAD.